Shembe | eNanda Online
Tag Archives: Shembe
Ebuhleni – Indlela yokuthuthukisa amagugu eNanda
Ukuzimela okwaqhutswa umeluleki u-Amos K Shembe owadabuka kude ekuphakameni ngo 1977 okumanje ubudlelwano bakhe budumile. Indawo yabo yalungiswa nje ngo 1980 etafuleni elalingajwayelekile lika Mtabutele ngemibono eminingi eyaqhamuka ngegama elihle ‘Ebuhleni’ (indawo enhle). Iningi lakujabulela kakhulu ukusiza ukubekezela okholweni, ikakhulukazi ngemikhosi kaMasingane noNtulikazi ngenkathi iningi linikezwa izindawo zokuhlala ezazakhiwe ngezintingo (lathes) zaboshwa ngentambo yenayiloni futhi zihlotsiswe ngomfanekiso ongijimela iziphuzo. Empeleni umsebenzi omuhle wabakhi. Ekuhlukeni indawo ephakathi yokuthandaza yakhiwengaphansi kwesihlahla ngamatshe amhlophe achaza ubukhulu nokuhluka ekungeneni ichaza umbhishibhi, amadoda, abesifazane kanye nezintombi. Umpholofethi wacabanga ukuvumela umdanso njengento ebalulekile ekukholweni emhlabeni wonke amakhulu abantu abadansayo abahlukaniswa ngobulili nangeminyaka.
Ukwabelani izipiliyoni ngendawo yokuthandaza esendaweni evulekile eshawa umoya.
Ukugcina inani lamasiko.
Ukunikeza isipiliyoni iningi lenkolo ye-Afrika nasekwenzeni kweningi.
Ivula amathuba omsebenzi ngokufaka imibono ehlukene yokudayisa isibonela ukudayisa amavuvuzela.
Ukuziphatha kwezivakashi ukuthola imvumo endaweni, indlela yokugqoka nokuhlukana kobulili kubalulekile.
Ekuphakameni- Indlela yokuthuthukisa amagugu eNanda
Eqinisweni ihumusheka nje ‘ngendawo yokujabula’ lendawo enhle yadayiswa ngo 1913 kumnikazi wayo umlungu ongomunye wabalandeli bakhe ngokuthola umpholofethi u-Isaiah Shembe. Lokhu kwathatheka njengephakathi lamaNazaretha iningi lenkolo yama-Afrika yokunyakaza yakhula yaba endlini yomlando endaweni enokuziphatha kwabantu okuzungezile.’indawo yokujabula’ indawo eshawa umoya engafani nesibaya. Abesilisa nabesifazane bayahlukana. Lokhu kubheka isipiliyoni sezivakashi endaweni eqondile neyokholo lwama-Nazaretha.
Ukukhuphula ubuhle bokholo endaweni
Ukuchaza umehluko nokubaluleka kwezindlela zokuhamba
Ukukhombisa ukuphenduka kokholo lwase-Afrika
Ukugcina inhlonipho kumpholofethi nge flora nefauna
Ukuthuthukisa indawo yonke ukwamukela izicelo ezifikayo.
Kunezibonelo ezinhle zamasiko angabonakali futhi nazo nje izakhiwo ezingabonakali kule ndawo, okufanele ukwazi uhla lwamatse apendwa ngabelungu awayechazi ‘izindonga’, isibonelo inkanyezi,izimpawu kanti nangokunjalo nokukhuluma kubalulekile kulemicimbi. Ukuphumelela kokuqothswa kahle futhi nokunikeza izivakashi nezifundiswa imvumo. Inikeza imvumo yokufakazela amasiko ahlukene. Kunamapulani ezinyawo ukwenza indawo enkulu ukuba qotho kulabo abasemadolobheni bamanje, ukuthuthukisa impilo yabantu, izindlu,nezikole zamabanga aphezulu. Ukubiyelwa kwendawo okwamanje kuwumphumela wengcinezi phakathi kwezinhlangano kodwa kunethemba lokuthi izolungiswa inkinga masinyane nje.
Ukunganakekelwa kwezakhiwo zamandulo kufanelwe kuxazululwe ngomkhuba owu-phrofeshinali ukukhuphula amandla amagugu. Lokhu kudala inselelo ekhethekile ngoba nalo isonto lavumelana ngemithetho ngezinto zamasiko. Isibonelo amaqhawe amane enza umsamo enzela amadlozi eduze kwe MR25 endlini ewulondo! Ukuziphatha kwezivakashi ukuthola imvumo endaweni, indlela yokuqgoka nokuhlukaniswa kobulili kubalulekile. Ukuthuthukisa indawo engenalutho kudingeka kwenzeke ngokuthinteka futhi nokuziphatha endaweni yangempela yokholo kufanelwa kugcinwe.
iqoshwe ngu eNanda.co.za	in Amasiko & Amagugu, Ezokuvakasha, Umlando & Nesikukhumbulayo	0 imibono